Semalt: Izinhlobo Eziyisisekelo Zokuhlaselwa KwamaHacker and How to Remedy A Website
Ukufezekisa imigomo yakho ehlosiwe ye-SEO kungancishiswa yizinto eziningana, iwebhusayithi yakhoukuphepha kube omunye wabo. Izindinganiso ezikhulayo kanye nezindaba ezitholakale emkhakheni wezobuchwepheshe zidinga izinga eliphezulu lokulawula izinyathelo zokuphepha.Izibalo zibonisa ukuthi amawebhusayithi angaphezu kwezingu-10 wehla ngenxa yebaduni nokuhlaselwa.
Ukuba ngumthengisi wokuqukethwe, izindaba zakho zokuphepha kwe-intanethi zikhulu kakhulu. Ukuqasha ochwepheshefuthi olunzulu lwe-SEO eqinile ukubhekana nokuphepha kwewebhusayithi yakho kusebenza ikakhulukazi ngenani elihle lezinkampani ezisetshenziswa ku-intanethi. Ukusebenza ne-SEOiqinisekisa abathengisi bokuphepha okuphezulu, ukulandelela phansi abancintisana phezulu, kanye nezizukulwane zama-backlink ngesikhathi sangempela. Ngokuhamba kwesikhathi, okuqukethweabathengisi banesithakazelo ekufezeni imigomo yabo futhi behlangana nezinzuzo ezinkulu.
uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt ImiSebenzi Yedijithali, ichaza ngokuhlaselwa kwe-cyber okudingeka usebenze kuyo.
Ngokuvame ukubhekwa njenge-side attack attack, ukuhlaselwa kwamandla okuhlukumezeka kusebenzisa abathengisi bokuhlaselwa banamuhlaukuphahla phansi uhlelo lwakho lwekhompyutha. Lolu hlobo lokuhlaselwa lusebenza ezimweni ezingavamile. Abahlaseli basebenzisa ama-side attack blind ukubona i-website yakhoimininingwane isebenzisa wonke amasu atholakalayo emhlabeni. Ngemva kokufinyelela PC yakho, abaduni bathola ukufinyelela kuwo wonke ama-akhawunti akho namaphasiwediukudabula nokuhlola ukwethembeka. Kodwa-ke, kulula ukubona ukuhlaselwa kwamandla okuhlukumeza njengoba uhlelo lwekhompiyutha lwenza okuningiimisebenzi yemininingwane ngesikhathi esifanayo.
Ukuhlaselwa kwamandla e-Brutal kulula ukubona. Ukuba isinyathelo esisodwa ngaphambi kwabaduni bekhokha okuningi.Ukuze uvimbele ukukhwabanisa usebenzisa ukuhlasela okuyimpumputhe, ungakwazi ukukhawulela logi emizamweni, bese uvala ama-akhawunti uma kwenzeka imizamo engaphumeleli.
Ukuhlasela komuntu phakathi
Ukuxhumana phakathi komsebenzisi wokugcina webhusayithi kanye nemiphumela yenkampani ekhuthaziwe kuhlasela kwe-MITM..Abaqaphi balawula ukuphepha kwewebhusayithi yakho ngokuvimbela amaforamu okuxhumana. Kule ndlela yokuhlaselwa, abaduni balawulakonke ngaphandle kolwazi lomsebenzisi wokugcina.
IMITM yokuhlasela izinyathelo zokuvimbela
Ukuvimbela abahlaseli ekulawuleni ukuphepha kwewebhusayithi yakho, cabanga ukusebenzisaizibhamu, izingosi ze-website, izinhlelo zokulwa ne-virus, nama-VPNs. Ukusebenzisa ukubethezeka okunokwethenjelwa phakathi kweseva kanye namakhasimende kusiza ukuvimbela abaduni.
Ukuhlaselwa kwesiteji senhlalo
Eyaziwa ngokuthi ubunjiniyela bezenhlalakahle, ukuhlaselwa komphakathi kuthathwa njengokululaindlela yokuphazamisa ifomu eliqinile. Abaqaphi abasebenzisa le nqubo baqondisa abasebenzisi ukubonisa amaphasiwedi abo kanye nemininingwane yekhadi lesikweletu.
Abahlaseli bafuna indlela yokuphatha izinhloso zabo ngokudala ubuhlobo obufudumelenabo. Ukuhlaselwa kwenjiniyela yomphakathi kungavinjelwa ngokugqugquzela abantu ngesidingo sokugcina imininingwane yabo ebucayi.
Ukuhlasela okusekelwe kwamakhasimende
Kulolu hlobo lokuhlaselwa, abahlaseli banciphisa ukuphepha kwewebhusayithi yakho ngokuphathaukuchofoza amadokhumenti avulekile nokuchofoza. Ngokwenza kanjalo, abaduni baholele kuwebhusayithi enonya eyenzela ukuthi usengozini ukuba uhlaselwe.
Ukwenza ukuqaphela kubasebenzi bakho ngesidingo sokuqaphela lapho usebenzisa iI-intanethi yomphakathi ibalulekile. Abaqaphi bahlale beqaphele ngokulinda isisebenzi sokulanda isofthiwe samahhala esakhiweni esiyingozi, bese sikhahlayonke inhlangano. Qaphela futhi uqaphele uma usebenzisa i-WIFI yomphakathi ukugwema ukukhishwa.
Ukuhlaselwa okukude kusetshenziselwa ukusakaza amagciwane amabi, ukuthola ukufinyelela ebucayiulwazi, futhi udale i-crackdown kuma-PC ahlosiwe.
Ukuqapha ngokuvimbela konke ukukhubazeka kwesayithi lakho kuzokugcina uvikelekileabaduni. Cabanga ukufeza kokubili ukuxhumana kwezokuphepha kwe-IT kwangaphakathi nangaphandle ukuze kuphephe.
Ukuphepha kwewebhusayithi yakho kubaluleke kakhulu uma kuziwa kokumaketha kwedijithali nokuqukethwe.Inani elihle lamasayithi ebhizinisi lihla njalo ngenyanga ngenxa yokuhlaselwa kwabaduni abanonya. Hasha ochwepheshe be-IT ukukugcina uvuselelwe futhivimbela isayithi lakho ukuthi lingehla ngenxa yomphumela wokukhwabanisa.